Karazan-tsolika isan-karazany aseho amin'ny Chinaplas - Sina Karazan-tsolika isan-karazany aseho amin'ny Chinaplas Supplier, Factory –Jwell
Nampiasaina tamin'ny famokarana sarimihetsika CPP, LDPE, LLDPE. Mampiasà endrika mihazakazaka mihazakazaka roa sosona, mampangatsiatsiaka tsara kokoa, kalitao azo antoka kokoa, fahaiza-manao ambony.
Ireto misy masontsivana momba ny vokatra:
1, Cylindricity, fahamendrehana amin'ny fandeferana concentricity: 0.01mm
2, fikorontanana ambonin'ny tany: Ra0.01
3, Ny mari-pahaizana fanaraha-maso ny mari-pana: +/- 0.5 ℃
4, hafainganam-pandeha: 160-500m / min
5, fifandanjana mavitrika: haavo G2.5
Ampiasaina amin'ny famokarana PET, PP / PS, PC ary ravina hafa. Ny fampiasana haingon-tsoavaly mihamangatsiaka miharo rindrina matevina, mihamangatsiaka tsara kokoa, manana fahaizana ambony. Roller amin'ny alàlan'ny famolavolana mihamitombo, mba mahazaka ny tsindry avo lenta amin'ny miovaova.
1, Clyndricity, fahamendrehana amin'ny fandeferana mifangaro: 0.01mm
2, fikorontanana ambonin'ny tany: Ra0.005
4, hafainganam-pandeha: 5-30m / min
5, fifandanjana mavitrika: haavo G6.3
PVC Wood-Plastika haingana amin'ny fanangonana birao
CJWH High Torque Series Twin Screw Extruder
Tsipika fanararaotana fitsapana laboratoara kely